I-horoscope engcono kakhulu yezo zonke izimpawu ze-zodiac
I-horoscope engcono kakhulu yazo zonke izibonakaliso ze-zodiac
Iminyaka eyishumi edlule kaMeyi iza. I-Spring igeleza kahle ehlobo futhi imicabango igijimela emabhishi ashisayo, emvelo. Noma kunjalo, umuntu akufanele akhohlwe ngomsebenzi. Imali encane efudumele akufanele iphazamise izinhlelo zakho zokufisa izifiso. Futhi ukuze sikugcine kahle, sinikeza i-horoscope engcono kakhulu kuzo zonke izibonakaliso ze-zodiac ngoMeyi-Juni 2010. Izinsuku zokugcina zikaMeyi noJuni zizofana nemibono yezinkanyezi, ngakho-ke izincomo zizovame ukuphela kukaMeyi noJuni. Kodwa izinsuku eziphumelelayo nezinzima ziboniswa kuphela ngoJuni.
NgoJuni inyanga yokuqala yehlobo. Kakade ekuqaleni, ukuqhuma okukhulu kwethemba kuzothatha isinqumo sokuphumelela kokubili izindaba zebhizinisi nezomuntu siqu. Ungesabi ukufaka izinhlelo zakho zasendle. Futhi ekupheleni kwenyanga kuzo zonke izibonakaliso ze-zodiac yisikhathi esihle sokufunda okuthile okusha.
Ama-Aries : (21.03 - 20.04).
I-horoscope engcono kakhulu ye-Aries ithi akudingeki uhlale isikhathi eside. Ngokuphindaphindiwe, imibuzo ephuthumayo iyovela ekhaya, bese usebenza, futhi akekho noyedwa ozoqapha ngaphandle kokuhlanganyela kwakho. Kungadingeka ukuthi uqale kabusha icala, elihlehlisiwe kanye ngesikhathi eside. NgoJuni 7-8, uqaphele kakhulu esiteshini nasemsebenzini: uzobe ungekho emqondweni futhi uphefumulelwe ukufika kwehlobo. Engxenyeni yesibili yenyanga, ukunakekelwa kwakho nokunakekelwa kwakho kuyodingeka umuntu osondelene nawe, ngakho-ke ungahlezi izinto ezibalulekile emsebenzini. Futhi emva kweminyaka engu-20 uzozizwa unamandla okwedlula amandla. Ungabhubhisi, kungcono ungene emidlalweni! Izinsuku eziphumelelayo: 15, 18, 27. Kunzima: 7, 21, 30.
Ngokusho kwe-horoscope, ekuqaleni kukaJuni noma ezinsukwini zokugcina zikaMeyi ungaba nokuzilibazisa okusha. Sekuyisikhathi sokuya ezifundweni nasezintabeni ezifundisayo noma ukungena esikoleni. Izinkambo zokuvakasha ezihlelwe kahle ngehora lesibili likaJuni ziyoba mnandi kakhulu futhi zifundise. Kusukela ngomhla we-15 kuya ku-21 kuJuni, yiba nengqondo kakhulu ekukhulumisaneni nomuntu othandekayo, kepha ungasondeli. Ngaphandle kwalokho, angase acabange ukuthi uyeke ukumthanda. Iminyaka eyishumi kaJuni ilungele iholidi eliphumuzayo nomndeni kanye nemisebenzi yasekhaya. Izinsuku eziphumelelayo: 6, 13, 29. Eziyinkimbinkimbi: 8, 16, 21.
I-Gemini : (22.05 - 21.06).
Emashumini amabili okuqala kaJuni, uGemini unethuba lokuzibonakalisa emsebenzini emsebenzini ongcono. Lezi yizibikezelo ze-horoscope ehamba phambili. Ungabonisa kabanzi amakhono akho enhlangano futhi usebenzise amathalenta afihliwe. Kodwa ngomhla wesi-7 no-8, qaphela ngesikhathi sokukhokha imali futhi ugweme noma iyiphi ingozi yezezimali. Ekupheleni kukaMeyi ungaba nezinhlelo ezintsha nemibono. Ukuqala kwehlobo yisikhathi esimangalisayo sobudlelwane bomlingani nokuxhumana okunobungane. Izinsuku eziphumelelayo: 9, 15, 18, 27, 28. Kunzima: 8, 17, 30.
Ngo-June, ukuthandwa kwakho enkampanini yabangane, ozakwabo, obajwayele bazokwanda ngokuphawulekayo. Uma usebenza okuningi nabantu, umsebenzi wakho uzophinde ukhuphuke. Mhlawumbe abangane abasha abasaziwayo, kanye nokuqala kothando lomvuthwandaba. Phakathi noJuni ungenza uhambo olujabulisayo. Ngemuva kukaJuni 18, kufanele uqalane nezimo ezinzima nezidingekayo. Futhi kule nyanga kuzophela ngentshiseko yothando: sebenzisa izintelezi zakho futhi ungesabi ukuzicabangela wena. Izinsuku eziphumelelayo: 2, 12, 27. Kunzima: 7, 8, 16, 21.
Amabhubesi ngoMeyi noJuni azoba nesifiso esifanayo ngothando nangendaba zezezimali. Ungakwazi ngisho nokuqala ibhizinisi elihlangene nomthandekayo wakho. Ngokuvamile inyanga yonke ezayo, ngaphandle kwenkathi kusukela ngo-15 kuya ku-21, ifanele ukwenza izinqumo zebhizinisi. Lezi zinsuku, akufanele ulindele ukuphumelela kwezezimali. Eminyakeni eyishumi ungathola isipho esizokusiza ukuba uthuthuke emsebenzini wakho, noma uphethe inkontileka enenzuzo. Ekupheleni kukaJuni, abangane abadala noma izihlobo ezikude zizozikhumbuza. Futhi ingxenye engcono kakhulu ukuthi uzojabula ngayo! Izinsuku eziphumelelayo: 6,16,27,29. Kunzima: 8, 21, 30.
I-Virgo : (24.08 - 23.09).
Ngo-May, noma yikuphi ukuxhumana kuzokulethela injabulo kuphela. Uma ukhathazekile ngokuphazamiseka ekusebenzelaneni nomuntu oseduze nawe noma abangane, manje unethuba langempela lokuthola izinto kahle. Hamba uqale ukwenza ukuvumelana, zama ukuqonda iphuzu lokubuka kolunye uhlangothi, futhi ungathola indlela ecacile kakhulu yokuphuma kwaleso simo. Isibili seshumi kaJuni sizojabulisa ngamathuba omuhle ebhizinisi. Kukhona ithuba lokukhuphuka esinye isinyathelo phezulu kwesikhundla somsebenzi. Izinsuku eziphumelelayo: 9, 15, 18, 27, 28. Kunzima: 8, 17, 30.
Emsebenzini nasemndenini uyinkosikazi yaleso simo. Isenzo esinamandla, ungashintsha isimo sebhizinisi lakho kusiqondiso osidingayo. UJuni inyanga enhle yokuthola ulwazi olusha, kanye nokudlulisela ulwazi lwakho kubalingani abasha. Ukuhamba ngezinyawo nokuzilibazisa kuzophumelela. Kuphela ngoJuni 15-21 kulo nyaka kuphela ukungaboni ngaso linye emsebenzini emsebenzini. Uma ungaqhubeki kakhulu, ngeke akulimaze kakhulu. Eminyakeni eyishumi yenyanga yokuqala ehlobo, isibikezelo sezinkanyezi sinomusa kakhulu ekuthengeni okuphumelelayo nangenzuzo ekhaya nasemsebenzini. Izinsuku eziphumelelayo: 6, 13, 29. Kunzima: 8, 16, 21.
I-Scorpio : (24.10 - 22.11).
Kule nkathi, ukuphila komuntu siqu nobuhlobo nomthandi wakho kuzothatha inani elihle lokunakwa kwakho. Mhlawumbe uzothathwa ngombhalo omusha othakazelisayo. Ebudlelwaneni obukhona, inguquko ebalulekile ingenzeka. Zama ukuqala izindaba ezisemthethweni, kungenjalo ukungajabuli komphathi ngeke kukugcine ulinde. Kusukela ngoJuni 15 kuya kuNhlangulana ka-20, kuzokwenziwa ukunakekelwa okukhulu kokukhathazeka okuhlobene nezingane. Ukuphela kukaMeyi - isikhathi sokuguqulwa okusebenzayo endlini, kanye nokuxhumana nabazalwane, odadewethu, omakhelwane. Izinsuku eziphumelelayo: 13,18, 27. Kunzima: 7, 21, 30.
Unayo yonke ithuba lokubonisa futhi uqaphele amathalenta akho afihlekile. Iya emsebenzini wakho ojwayelekile ngokwengeziwe, ufike ngezindlela ezintsha zokuxazulula imisebenzi eyaziwayo. Zama ukwenza konke okwenzayo, ngokuhle kakhulu. Unganaki umsebenzi ongawunandi kakhulu kuwe. Nguye ongakulethela impumelelo engalindelekile, kufaka phakathi izinto. Ukuphila kwakho komuntu nomndeni kuyoba nocebile kakhulu. Ngemuva kukaMeyi 22, ungakwazi ngokuphepha ukuqala ukulungisa indlu noma uhlele noma yimuphi umcimbi womndeni. Izinsuku eziphumelelayo: 6,13,27,29. Kunzima: 7, 16, 21.
Kulesi nenyanga ezayo uzophatha kalula kokubili izindaba zezobuchwepheshe nezasekhaya. Ukuzinikezela kwakho kunamandla kakhulu manje. Ngakho-ke, ufuna ukuqala okusha ukuvula ikhasi elisha lokuphila. Futhi ngokuqinisekile kuyoba namathuba kulokhu. Ngakho ngesibindi phambili! Ukuthatha izindaba ezintsha kuphela futhi ukuhlelwa kwemibono emisha kungcono emva kuka-9 Juni - bese uya endleleni ngeke kube khona ukuvimbela okuthile. Unethuba lokuqalisa ngokushesha umsebenzi omkhulu wokwenza ngcono indlu. Izinsuku eziphumelelayo: 6, 15, 29. Eziyinkimbinkimbi: 7, 8, 16, 17.
I-Aquarius : (21.01 - 19.02).
I-horoscope engcono kakhulu iyeluleka: Ungaphuthelwa amathuba amabhizinisi amahle azokunika inyanga kaJuni. Yonke imizamo yakho eqondiswe enkampanini yezobuchwepheshe izokhokhelwa ngemali enhle kakhulu nokuqashelwa kozakwethu. Qala amaphrojekthi amasha ngesonto lesibili likaJune, futhi ngoMeyi, gxila ekuqedeni amaphrojekthi aseqalile kakade. Okubaluleke kakhulu kuzoba izindaba zakho zomndeni kanye nobuhlobo nezihlobo, ikakhulukazi nabadala. Eminyakeni eyishumi kaJuni, ungaba umqali womcimbi womndeni noma umcimbi wobungane. Izinsuku eziphumelelayo: 9,15,28,29. Kunzima: 8, 17, 21.
Ama-pisces : (20.02 - 20.03).
Ngama-Pisces kaFebruwari, ekupheleni kukaMeyi-ekuqaleni kuka-June yisikhathi esicindezelayo, esithweswe umthwalo womsebenzi kanye nezinkinga zomndeni. Labo abazalelwa ngo-March, babenemali - manje empilweni yabo kuyoba nokuningi okusha nokuthakazelisayo. Bangabamba iqhaza ezenzakalweni ezingavamile, kanti inkinga yobunzima nokuphikisana kuzohlala isikhathi esifushane: kusukela ngoJuni 17 kuya kuJuni 21. Ngemuva kukaJune 23, zonke izidakamizwa zilindele ukuvakasha komshado noma umhlangano othembisayo. Izinsuku eziphumelelayo: 6, 14, 27, 29. Eziyinkimbinkimbi: 8, 16, 21.
Sithemba ukuthi ukubonga ku-horoscope engcono kakhulu kuzo zonke izibonakaliso ze-zodiac ungakwazi ukunquma ngezinto ezinkulu! Yiba nesibindi emisebenzini yakho, kholelwa emicabangweni engcono kakhulu engaphansi. Ngaphambi kwehlobo, futhi nalo - isikhathi esisha, esithakazelisayo empilweni yakho!
Uthando wesifazane, i-horoscope ejwayelekile ngesonto
Ama-talisman ukuheha uthando
Isibikezelo sabasebenzisa izinkanyezi ngenyanga ka-Ephreli
Ngo-Ephreli 22, isibikezelo sezinkanyezi
Isibikezelo sezinkanyezi kusukela ngoFebruwari 5
Yini evutha indlebe efanele?
Ukunakekelwa kwesikhumba nge-freckles amaningi
Ukubonakaliswa kwesisa kumuntu othandweni
Inhliziyo enempilo, imithwalo yegazi ehlanzekile
Ithonya likhilimu omuncu empilweni
Kungani abantu bethembisa futhi bengasigodli isithembiso?
Inani lobuhlobo: U-Natalia Sturm wanikeza ingoma ku-Evgeny Asin
Ukudla komzimba ngezinsuku ezingu-3: unonya, kepha usebenza kahle
Uma indoda ichitha ubudlelwane
Izindlela zokupheka ezingcono kakhulu ezitholakala ekhaya
Izinhlobo ezingu-5 zamadoda okufanele zigweme
Indlela yokuphenduka ibe ngowesifazane okhangayo, iseluleko esiwusizo
Amapancake agcwele i-yoghurt namajikijolo
Izambatho zehhovisi: sikhetha ikhabethe elihlelekile nelingabizi
Isaladi kusuka kuma-eggplant abilisiwe
I-Orange jam ne-whisky